धेरै कफी पिउने बानी छ ? सावधान « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
धेरै कफी पिउने बानी छ ? सावधान
जाडो महिनामा मात्र होइन गर्मी मौसममा पनि कफी पिउने गरिन्छ । कतिपय मानिस त कफीको शौखिन नै हुने गर्दछन् । विशेष गरी कार्यालयमा काम गर्ने युवापुस्ता माझ कफी क्रेज बढि छ ।
चिकित्सकका अनुसार दिनमा ३र४ कपभन्दा बढि कफीको सेवन गर्नु हुदैन । अन्यथा यसले निन्द्रामा प्रभाव पार्दछ । मानिस पर्याप्त निदाउन पाउँदैन । यस अलावा कफीको अत्यधिक सेवनले मानसिक तथा शारीरिक समस्या निम्त्याउँछ । कफीले मानिसलाई डर पैदा गर्ने र मुटुको धड्कन रोक्ने सम्भावना बढाउने गर्दछ ।
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७७, आइतबार १० : ३८ बजे
गर्भवती अवस्थामा किन वाकवाकी लाग्छ ?
सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता